Willian oo ku jees jeesay Antonio Conte kadib ku guuleysigooda koobka FA Cup – Gool FM
(Chelsea) 20 Maajo 2018. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Chelsea Willian aya ku dhaqaaqay fal lagu tilmaamay inuu yahay mid uu kaga maadsanayo macalinka reer talyaani ee Antonio Conte.
Willian ayaa kulankii finalka FA Cup kaga qeyb qaatay daqiiqadihii ugu dambeeyay ee ciyaarta, kadib marka uu ku badalay Eden Hazard oo dhaliyay goolka kaliya ee kulankan ka dhashay.
Xidiga xulka qaranka Brazil ayaa wuxuu kulanka kadib kusoo daabacay bartiisa rasmiga ah ee Instagram-ka sawirka kooxda inta ay ku gudi jirtay dabaal daga ku guuleysiga koobka FA Cup oo ay kaga guuleysteen Manchester United 1-0.
Laakiin Willian ayaa gabi ahaanba ku qariyay sawirka Antonio Conte oo idil koobab la’is dul saaray, sida inuu doonayo inuu kaga tirtiro sawirkiisa si guud.
Si kastaba Willian ayaa ka mid ah xidigaha ugu muhiimsa ee kooxda Chelsea, laakiin Antonio Conte ayaa si lama filaan ah keydka u dhigay in ka badan hal kulan, isagoo kaga soo muuqday daqiiqado kooban inkastoo uu bandhig wanaagsan kala soo muuqday.